विकास भनेको खुला सेक्स हो ?
राजनीतिक दलहरु भन्छन्– अवको निकास, आर्थिक विकास ।
यो राजधानी ठमेलको फोटो हो । देशैभरि मसाज सेन्टर छन्, दोहोरी साँझ छन् र जता पनि यौन क्रियाकलाप बढेर गएका छन् । उद्योग यसरी खुलेको भए बेरोजगारी बढ्ने थिएन । रोजगारी बढेको मुलुकमा जे होला, गरीव मुलुकमा यौन बिकृति भनेको महारोग हो, यो महारोगले नेपालको कुनै पनि सहरलाई बाँकी राखेको छैन । नेपाल यौन विकृत मुलुक बन्दै गएको छ ।
आर्थिक विकासका लागि आर्थिक गतिविधिहरु व्यापक हुनुपर्छ । नेपालमा सेक्स गतिविधि यति बिघ्न बढेका छन् कि टोल टोलमा गर्भपतन सेवा पो सुरु भएका छन् । सुरक्ष्ँित गर्भपतन केन्द्रको व्यापकता आर्थिक विकासको सूचक हुनसक्दैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवा वास्तवमा बैवाहिक जोडीका लागि हुनुपर्ने हो, नेपालमा भर्खरका उमेर पुगे वा नपुगेकाहरु गर्भपतन गराइरहेका छन् ।
जबसम्म निकासीयोग्य वस्तुहरुको उत्पादन र व्यापक रोजगारी सिर्जना गरिन्न तवसम्म आर्थिक विकास कसरी सम्भव छ ? देश बलियो हुन राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ, यसैको जगमा भएको र गरेरको विकास आर्थिक विकास हो, जुन नेपालमा अहिलेसम्म सुरु भएकै छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा निकासी व्यापक भएको छ । युवा श्रमशक्ति निकासी राष्ट्र कमजोर पार्ने कार्य हो ।
स्मरणरहोस्, विकास त फिजीमा पनि छ, सिक्किममा पनि भएको छ । भूटान त विकासको धेरै माथि छ, उसको परक्यापिटा आम्दानी युरोपको स्तरको भइसकेको छ । तर भूटान स्वतन्त्र त छ, भारतको सुरक्षा छातामुनीको स्वतन्त्रता । नेपाल कहिले पनि कसैको छातामुनी बसेको छैन, बस्न सक्दैन । नेपाल आफैमा जेठा मुलुक, सधैं स्वतन्त्र मुलुक, हामीले हाम्रो स्वतन्त्रताको मापन गरेका छौं ? किनभने हाम्रो सिमानामा त भारतले दशगजा नै मिचेर राजमार्ग बनाइसक्यो, हामीले यसबारेमा कहिले पनि बोलेनौं । आफ्नै सीमाबारे नबोल्ने कसरी विकास
हुनसक्छ ? स्वाधीनता खतरामा छ, स्वाधीनता खतरामा भएको मुलुक विकासको गतिमा होइन, पतनको मतिमा छ भनेर जो कसैले बुझ्न सक्छ ।